Slot လှည့်ရတာငြီးငွေ့နေသူများအတွက် Birds Party! - Myanmar Online Game
Slot ဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Reel3ခု5ခု လိုမျိုး အပေါ်မှာမှ Pay line တွေနဲ့တွက်ပြီးဆော့လေ့ရှိတာကို သိကြမှာပါ။ ဒီလို ပုံစံထဲမှာကိုပဲ မတူတဲ့ Game Theme တွေ Mini Game တွေအများကြီးကွဲနေတာတွေ ရှိပေမယ့်လဲ ဒီပုံစံအတိုင်းပဲလှည့်ရတာကိုပျင်းနေပြီဆိုရင်တော့ Birds Party နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cartoon Style အရောင်စုံငှက်ပေါက်လေးတွေကို Elements အနေနဲ့ယူပြီးတော့ ပုံမှန်ဆော့နေကြအတိုင်း Reel တွေမပါပဲ Casual Game ပုံစံလေး ထူးထူးခြားခြားဖန်တီးထားတဲ့ Slot ကစားနည်းလေးပါ။ ပုံမှန် Slot ကစားနည်းတွေဆော့ရင် ကိုယ်သိပ်မနိုင်သလိုဖြစ်ဖြစ်၊ Grand Prize ကြီးတွေမရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားနေရလား?
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီ Birds Party ကတော့ ကိုယ်နဲ့ အံကိုက်ဖြစ်မှာပါနော်! Birds Party က JDBYG ရဲ့ ပထဆုံး Elemination ကစားနည်းဖြစ်ပြီးတော့ Slot ကစားသူတွေအတွက် လုံးဝမတူ လုံးဝထူးခြားတဲ့ Slot အတွေ့အကြုံအသစ်ကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ ဒီကစားနည်းက ကိုယ့်စိတ်ထဲက ဘယ်လောက်နိုင်မယ်ဆိုပြီး Math အရတွက်ထားတာထက်ကို ကျော်လွန်သွားမှာဖြစ်လို့ အရမ်းကိုဆော့ရတာ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းမှာပါ။
အများဆုံး Multiple ကလဲ 50000X အထိတောင်နော်!
Lucky Winner တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒီ Slot ကစားနည်းကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်!
ဒီကစားပွဲမှာဆိုရင်တော့ 4×4 , 5×5 , 6×6 ဆိုပြီး Level3ခုခွဲထားပြီးတော့ ငှက်ကလေးတွေက Random ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Level တစ်ခုခြင်းစီတိုင်းမှာလဲ Level တက်ဖို့အတွက် Stage – Clear Symbol တွေပါပါတယ်။ Level တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ Minimum Requirement တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပထမ level အတွက်ကတော့ အရောင်တူငှက် အနည်းဆုံး4ခုနဲ့အထက် တွဲရမှာပါ။ ဒုတိယ level ကတော့ အရောင်တူငှက်5ခုနဲ့အထက်ဖြစ်ပြီးတော့ တတိယ level မှာတော့6ခုနဲ့အထက်ပါ။
Game play ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Level တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ Level Zone(ဥပမာ – 4×4) နဲ့ညီတဲ့ Symbol အရေအတွက်တွေ Random ကျလာမှာပါ။ အဲ့ကျလာတဲ့ Symbol ငှက်တွေထဲမှာမှ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Minimum Requirement နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ Symbol တွေအတွက် အမှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး Symbol တွေကပျောက်သွားမှာပါ။
ပျောက်သွားတဲ့ Symbol တွေနေရာမှာ သူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ Symbol တွေက ကျလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ အပေါ်ဆုံးလွတ်နေတဲ့နေရာအတွက်ကိုတော့ Symbol အသစ်တွေကကျလာပြီး ဖြည့်သွားမှာပါ။
Minimum requirement နဲ့ညီနေသ၍ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ စနစ်အရတွက်ချက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျလာတဲ့ Symbol တွေထဲမှာ Stage Clear Symbol တွေသာပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင် အရောင်တူ ညီမညီကိုအရင်မကြည့်ပဲ Stage Clear Symbol ကိုအရင် ချေပါတယ်။
Stage Clear Symbol မရှိတော့ဘူး ဆိုမှသာ အရောင်တူတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ Level တစ်ခုခြင်းစီအတိုင်းအတွက် Stage Clear Symbol 15 ခုသာပြည့်သွားပြီဆိုရင် နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုတက်သွားမှာပါ။
အစဉ်လိုက်ပြောရရင်တော့ 4×4(level 1) > 5×5(level 2) > 6×6(level 3) ပါ။ Level3မှာ Clear Stage Symbol 15 ခုပြည့်သွားခဲ့ရင်တော့ Level 1 ကိုပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Free Game Symbol (အပြာရောင် ဥ) လေးသာ ကျလာတဲ့ Symbol တွေထဲမှာပါရင်တော့ Player က Free Spin 10 ခါလှည့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလှည့်ခင်မှာ ရမယ့် Multiplyer ကိုတော့အဲ့ဥလေးကိုခွဲပြီးတော့ 1 မှ5x အထိရနိုင်သေးတယ်နော်။
Stage Clear Symbol တွေကတော့ ပထမ level မှာ Lemon , ဒုတိယ level မှာ Nut, တတိယ Level မှာ Strawberry တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Symbol ကျတဲ့ပုံလေးတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဘေးတိုက်(သို့)ဒေါင်လိုက် အရောင်တူ Symbol တွေရှိရင် ချေပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်ပါတယ်။
လွတ်သွားတဲ့နေရာမှာတော့ အပေါ်တည့်တည့်မှာရှိတဲ့ Symbol ကကျလာမှာပါ။
ပထမ Level မှာ : အနည်းဆုံး အရောင်တူ Symbol 4ခုနဲ့အထက်ဒုတိယ Level မှာ : အနည်းဆုံး အရောင်တူ Symbol 5ခုနဲ့အထက်တတိယ Level မှာ : အနည်းဆုံးအရောင်တူ Symbol 6ခုနဲ့အထက် တွဲမှအမှတ်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်!
ဒီကစားနည်းက မြင်ရတဲ့ပုံတွေ နောက်ခံတီးလုံးတွေ ကအစ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီတော့ Birds Party မှာသွားကဲချင်နေပြီဆိုရင်တော့ JDBYG ရဲ့ Slot အသစ်စာရင်းထဲမှာ ထပ်ပိုင်းမှာတင်တန်းတွေ့ရမှာပါနော်! Party သွားပြီးကဲလိုက်ရအောင်!